PNFC ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်ဝေထူးနဲ့ သီးသန့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် – Federal Journal
[သီးသန့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်] မေ ၁၄၊ ၂၀၂၂
“လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျပ်အတည်းပြဿနာသည် တနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတယ်၊ ဒေသပေါင်းစုံ အလွှာပေါင်းစုံက ပြည်သူလူထုပေါင်းစုံနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ပြဿနာမျိူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုပြဿနာ ကြီးကြီးမားမားကြီးကို စစ်ကောင်စီက ပြဿနာမဟုတ် သယောင်ယောင်ပုံဖော်ပြီးတော့မှ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပြဿနာကို အားလုံးထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အစုအဖွဲ့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ပဲပြောပြော၊ တနည်းအားဖြင့် စစ်ကောင်စီရဲ့ ခါးပိုက်ထဲကို ထည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ ဒါသည် ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အကြား၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုနဲ့ အလွှာအသီးသီးက နွေဦးတော် လှန်ရေး အင်အားစုတွေအကြား သပ်လျှို သွေးခွဲတာဖြစ်တယ်”
စစ်ကောင်စီနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမည့် တိုင်းရင်းသားလိုက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်း များသို့ တိုက်တွန်းပန်ကြားချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပအိုဝ်းအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (PNFC)၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်ဝေထူးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် သီးသန့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားချက်ကို ဖတ်ရှု နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ထဲမှာပါတဲ့ တိုက်လိုက်၊ ဆွေးနွေးလိုက် ဆိုတာက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲခင်ဗျ?
ဖြေ။ ။ တိုက်လိုက်ဆွေးနွေးလိုက်ဆိုတာက တကယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်တော့ အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲရေး ဖြစ်ဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ စိတ်စေတနာမျိူးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် တောင်ပိုင်းကိုတိုက်မယ်။ တောင်ပိုင်းကို ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် မြောက်ပိုင်းကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ သပ်လျှိုသွေးခွဲလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆွေးနွေးတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးလိုက် တိုက်လိုက် သံသရာလည်နေတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ SAC က သူ့ရဲ့ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတွေဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ ကြေငြာချက်မှာ ဖော်ပြထားတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ရှင်းပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲက သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က အာဏာရှင် သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံက ဒီပြည်ထောင်စုကြီး ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အကျပ်အတည်းက တကယ်တမ်းတော့ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ ကြားမှာဖြစ်တဲ့ အကျပ်အတည်းမဟုတ်ဘူး၊ တပ်မတော်နဲ့ NLD ပါတီကြားဖြစ်နေတဲ့ အကျပ်အတည်း ပြဿနာလည်း မဟုတ်ဘူး။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကျပ်အတည်းပြဿနာသည် တနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတယ်၊ ဒေသပေါင်းစုံ အလွှာပေါင်းစုံက ပြည်သူလူထုပေါင်းစုံနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ ပြဿနာမျိူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုပြဿနာကြီးကြီးမားမားကြီးကို စစ်ကောင်စီက ပြဿနာမဟုတ် သယောင်ယောင်ပုံဖော်ပြီးတော့မှ အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကို အားလုံးထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှ သူ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ပဲပြောပြော၊ တနည်းအားဖြင့် စစ်ကောင်စီရဲ့ ခါးပိုက်ထဲကို ထည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်။ ဒါသည် ပြည်သူလူထုနဲ့ တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့အကြား ၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုနဲ့ အလွှာအသီးသီးက နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြား သပ်လျှို သွေးခွဲတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုသပ်လျှိုသွေးခွဲခြင်းအားဖြင့် သူ့ရဲ့အာဏာကို တည်မြဲအောင်လုပ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စစ်ကောင်စီရဲ့ နည်းပရိယာယ် နိုင်ငံရေးပုံစံဟောင်းတွေ ပေါ့နော်။ ယခင်နိုင်ငံရေး ကစားကွက်ဟောင်းတွေ၊ နည်းလမ်းဟောင်းတွေ အသုံးပြုနေတဲ့အပေါ်မှာ ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံး သတိပြုသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ အကြံပြုချင်တယ်။ ကျနော်တို့ ၂၀၂၁ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့ရင့်ကျက်မှုမရှိဘူး ဆိုပေမယ့်၊ စစ်ကောင်စီရဲ့ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဟောင်းတွေ အသုံးပြုပြီးမှ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ သပ်လျှိုသွေးခွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲဟာ အတုအယောင်ပဲဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ အာဏာ တည်မြဲရေးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နေရပါတယ်။
မေး။ ။ အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာမှ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ကြေငြာချက်မှာ ပါရှိတယ်။ Stateholder တွေအားလုံးပါဝင်ဖို့ပေါ့ ဒါကရောဖြစ်နိုင်ပါ့မလား?
ဖြေ။ ။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဟာ ကျနော်တို့နားလည်တာကတော့ အဓိကအခြေခံကျတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ၊ တော်လှန်ရေးအင်အားစု ပေါင်းစုံက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ အမျိူးသားတန်းတူရေး၊ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး အပြည့်အဝ ရရှိရေးအခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမျိူးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုပြဿနာမျိူးကို အစိုးရတစ်ရပ်က ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့ အင်အားစုတွေအားလုံး ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှသာလျှင် မှန်ကန်တဲ့ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ PNFC အနေနဲ့ NUCC/NUG/CRPH/PDF အပါအဝင်စတဲ့ တော်လှန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တွေ၊ ပြည်နယ်ဒေသ Stakeholder တွေပါဝင်တဲ့ အခင်းအကျင်းမျိူးကိုသာ တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒီလိုတောင်းဆိုခြင်းဟာ တနည်းအားဖြင့် တပ်မတော်က ဒီနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်စရာ မလိုဘူး။ တပ်မတော်သည် သူ့ရဲ့စစ်တန်းလျားကိုသာ ပြန်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိူးကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ စစ်ကောင်စီက ဒီလိုအခင်းအကျင်းမျိူးကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးကို ထိပါးလာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်အရာကိုမှ လိုက်လျောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တယ်။ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်က ကျနော်တို့နဲ့ အရမ်းကြီး ကွဲလွဲနေမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။
မေး။ ။ တကယ်လို့သာ တပ်မတော်က နိုင်ငံရေးကနေထွက်ပြီး စစ်တန်းလျားကိုပြန်မယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေက ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ အထမြောက်မယ်လို့ ယုံကြည်သလားခင်ဗျ။
ဖြေ။ ။ တပ်မတော်ကသာ သူတို့ရဲ့ စစ်တန်းလျားကိုပြန်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ ကျင်းပစရာမလိုဘဲနဲ့ အလိုလိုငြိမ်းချမ်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုပေါင်းစုံနဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တော်လှန်ရေး အင်အားစုပေါင်းစုံက ဒီဖက်ဒရယ် ချာတာ ၁၊၂ အပေါ်မှာ သဘောတူပြီးတော့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့သွားမယ့် Political Goal မှာ ကျနော်တို့သွားမယ့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း၊ ကျနော်တို့ပုံဖော်မယ့် နိုင်ငံရေးဒီဇိုင်း၊ နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ ဒီလိုရှိတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံရေး Road Map တွေ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြမြေပုံတွေ အားလုံးသဘောတူ ဆွေးနွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် တပ်မတော်ကသာလျှင် စစ်တန်း လျားကိုပြန်မယ်၊ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ဦးဆောင်စွက်ဖက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံ ပြည်တွင်းစစ် လည်းမရှိသလို၊ ဘာပြဿနာမှလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာ တကူးတက ကြီးခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့မလိုတော့ဘူပေါ့နော်။ ကျနော်အဲဒီလိုပဲ ရှင်းလင်း ဖြေကြားချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဘာများဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိမလဲ။
ဖြေ။ ။ တပ်မတော်က အမျိူးသားနိုင်ငံရေးကို ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို စွဲကိုင်ထားတယ်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာ တကယ်တမ်းတော့ တပ်မတော်ဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ ပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရက မဟုတ်ဘဲ တပ်မတော်က ဦးဆောင်ပြီးလုပ်နေလို့ မရဘူး။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို တပ်မတော်က ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှ မဖြစ်စလောက် အခွင့်အရေး၊ ကတိကဝတ်တွေပေးပြီးတော့မှ တက်ရောက်လာအောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနေခြင်းဟာ တစ်ဖက်မှာ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ အမျိူးသားနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ တပ်မတော်က ဦးဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတစ်ခု၊ သမိုင်းတစ်ခုကို မလိမ့်တစ်ပတ်နဲ့ ပုံဖော်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသားအင်အားစု အပါအဝင် နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးသည် တပ်မတော်က အမျိူးသားနိုင်ငံရေးမှာ ဦးဆောင်နေတာကို ရှုတ်ချတဲ့အင်အားစုတွေအဖြစ်ရှိနေတဲ့အတွက် တပ်မတော်က ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ သတိကြီးကြီးနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ ဆက်လက်တော်လှန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အားလုံးရဲ့ ဘုံရည်မှန်းချက်ဟာလည်း ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ သီးသန့်ခေါင်းစဉ်တပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ ကျနော်ဖြည့်စွက်ပြောချင်ပါတယ်။